Myanmar Monk Student Association: July 2013
Myanmar Monk Student Association
TOEFL နှင့် IELTS
* ဘာသာ သာသနာနှင့်လူမျိုးတို့၏ ဂုဏ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတတ်သော အရေးအသားမျိုးကို ရှောင်ရှားရန်၊
* အချင်းချင်း ညီညွတ်မှု့ကို ပျက်စီးစေတတ်သော အကြောင်းများကို ရေးသားခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်၊
* သာသနာနှင့် မအပ်စပ်သော အဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ငြိုးနွမ်းစေတတ်သော ပုံများကိုတင်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်၊
* ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများထက် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော အကျိုးများစေနိုင်သော ပုံများ စာများကိုသာ ရေးသားရန်၊
* MMSAသည် ပညာရေးအဖွဲ့စည်း ဖြစ်သည့် အတွက်နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေးအသားများကို ရေးခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်၊
* ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မိမိတို့လေ့လာနေသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဗဟုသုတအလို့ငှါ ရေးသား မျှဝေကြရန်၊
Kalama Sutta ကာလာမသုတ်
(Anguttara Nikaya III, 65)
The Instruction to the Kalamas
Translated from the Pali by Soma Thera
Note: Bhikkhu Bodhi's essay, "A Look at the Kalama Sutta", offers some important insights into this sutta, clarifying some points that have recently become muddled in various contemporary teachings.
(The Kalamas of Kesaputta go to see the Buddha)
1. I heard thus. Once the Blessed One, while wandering in the Kosala country withalarge community of bhikkhus, enteredatown of the Kalama people called Kesaputta. The Kalamas who were inhabitants of Kesaputta: "Reverend Gotama, the monk, the son of the Sakyans, has, while wandering in the Kosala country, entered Kesaputta. The good repute of the Reverend Gotama has been spread in this way: Indeed, the Blessed One is thus consummate, fully enlightened, endowed with knowledge and practice, sublime, knower of the worlds, peerless, guide of tamable men, teacher of divine and human beings, which he by himself has through direct knowledge understood clearly. He set forth the Dhamma, good in the beginning, good in the middle, good in the end, possessed of meaning and the letter, and complete in everything; and he proclaims the holy life that is perfectly pure. Seeing such consummate ones is good indeed."
2. Then the Kalamas who were inhabitants of Kesaputta went to where the Blessed One was. On arriving there some paid homage to him and sat down on one side; some exchanged greetings with him and after the ending of cordial memorable talk, sat down on one side; some saluted him raising their joined palms and sat down on one side; some announced their name and family and sat down on one side; some without speaking, sat down on one side.
(The Kalamas of Kesaputta ask for guidance from the Buddha)
3. The Kalamas who were inhabitants of Kesaputta sitting on one side said to the Blessed One: "There are some monks and brahmins, venerable sir, who visit Kesaputta. They expound and explain only their own doctrines; the doctrines of others they despise, revile, and pull to pieces. Some other monks and brahmins too, venerable sir, come to Kesaputta. They also expound and explain only their own doctrines; the doctrines of others they despise, revile, and pull to pieces. Venerable sir, there is doubt, there is uncertainty in us concerning them. Which of these reverend monks and brahmins spoke the truth and which falsehood?"
(The criterion for rejection)
4. "It is proper for you, Kalamas, to doubt, to be uncertain; uncertainty has arisen in you about what is doubtful. Come, Kalamas. Do not go upon what has been acquired by repeated hearing; nor upon tradition; nor upon rumor; nor upon what is inascripture; nor upon surmise; nor upon an axiom; nor upon specious reasoning; nor uponabias towardsanotion that has been pondered over; nor upon another's seeming ability; nor upon the consideration, 'The monk is our teacher.' Kalamas, when you yourselves know: 'These things are bad; these things are blamable; these things are censured by the wise; undertaken and observed, these things lead to harm and ill,' abandon them.
(Greed, hate, and delusion)
5. "What do you think, Kalamas? Does greed appear inaman for his benefit or harm?" -- "For his harm, venerable sir." -- "Kalamas, being given to greed, and being overwhelmed and vanquished mentally by greed, this man takes life, steals, commits adultery, and tells lies; he prompts another too, to do likewise. Will that be long for his harm and ill?" -- "Yes, venerable sir."
6. "What do you think, Kalamas? Does hate appear inaman for his benefit or harm?" -- "For his harm, venerable sir." -- "Kalamas, being given to hate, and being overwhelmed and vanquished mentally by hate, this man takes life, steals, commits adultery, and tells lies; he prompts another too, to do likewise. Will that be long for his harm and ill?" -- "Yes, venerable sir."
7. "What do you think, Kalamas? Does delusion appear inaman for his benefit or harm?" -- "For his harm, venerable sir." -- "Kalamas, being given to delusion, and being overwhelmed and vanquished mentally by delusion, this man takes life, steals, commits adultery, and tells lies; he prompts another too, to do likewise. Will that be long for his harm and ill?" -- "Yes, venerable sir."
8. "What do you think, Kalamas? Are these things good or bad?" -- "Bad, venerable sir" -- "Blamable or not blamable?" -- "Blamable, venerable sir." -- "Censured or praised by the wise?" -- "Censured, venerable sir." -- "Undertaken and observed, do these things lead to harm and ill, or not? Or how does it strike you?" -- "Undertaken and observed, these things lead to harm and ill. Thus it strikes us here."
9. "Therefore, did we say, Kalamas, what was said thus, 'Come Kalamas. Do not go upon what has been acquired by repeated hearing; nor upon tradition; nor upon rumor; nor upon what is inascripture; nor upon surmise; nor upon an axiom; nor upon specious reasoning; nor uponabias towardsanotion that has been pondered over; nor upon another's seeming ability; nor upon the consideration, "The monk is our teacher." Kalamas, when you yourselves know: "These things are bad; these things are blamable; these things are censured by the wise; undertaken and observed, these things lead to harm and ill," abandon them.'
(The criterion for acceptance)
10. "Come, Kalamas. Do not go upon what has been acquired by repeated hearing; nor upon tradition; nor upon rumor; nor upon what is inascripture; nor upon surmise; nor upon an axiom; nor upon specious reasoning; nor uponabias towardsanotion that has been pondered over; nor upon another's seeming ability; nor upon the consideration, 'The monk is our teacher.' Kalamas, when you yourselves know: 'These things are good; these things are not blamable; these things are praised by the wise; undertaken and observed, these things lead to benefit and happiness,' enter on and abide in them.
(Absence of greed, hate, and delusion)
11. "What do you think, Kalamas? Does absence of greed appear inaman for his benefit or harm?" -- "For his benefit, venerable sir." -- "Kalamas, being not given to greed, and being not overwhelmed and not vanquished mentally by greed, this man does not take life, does not steal, does not commit adultery, and does not tell lies; he prompts another too, to do likewise. Will that be long for his benefit and happiness?" -- "Yes, venerable sir."
12. "What do you think, Kalamas? Does absence of hate appear inaman for his benefit or harm?" -- "For his benefit, venerable sir." -- "Kalamas, being not given to hate, and being not overwhelmed and not vanquished mentally by hate, this man does not take life, does not steal, does not commit adultery, and does not tell lies; he prompts another too, to do likewise. Will that be long for his benefit and happiness?" -- "Yes, venerable sir."
13. "What do you think, Kalamas? Does absence of delusion appear inaman for his benefit or harm?" -- "For his benefit, venerable sir." -- "Kalamas, being not given to delusion, and being not overwhelmed and not vanquished mentally by delusion, this man does not take life, does not steal, does not commit adultery, and does not tell lies; he prompts another too, to do likewise. Will that be long for his benefit and happiness?" -- "Yes, venerable sir."
14. "What do you think, Kalamas? Are these things good or bad?" -- "Good, venerable sir." -- "Blamable or not blamable?" -- "Not blamable, venerable sir." -- "Censured or praised by the wise?" -- "Praised, venerable sir." -- "Undertaken and observed, do these things lead to benefit and happiness, or not? Or how does it strike you?" -- "Undertaken and observed, these things lead to benefit and happiness. Thus it strikes us here."
15. "Therefore, did we say, Kalamas, what was said thus, 'Come Kalamas. Do not go upon what has been acquired by repeated hearing; nor upon tradition; nor upon rumor; nor upon what is inascripture; nor upon surmise; nor upon an axiom; nor upon specious reasoning; nor uponabias towardsanotion that has been pondered over; nor upon another's seeming ability; nor upon the consideration, "The monk is our teacher." Kalamas, when you yourselves know: "These things are good; these things are not blamable; these things are praised by the wise; undertaken and observed, these things lead to benefit and happiness," enter on and abide in them.'
(The Four Exalted Dwellings)
16. "The disciple of the Noble Ones, Kalamas, who in this way is devoid of coveting, devoid of ill will, undeluded, clearly comprehending and mindful, dwells, having pervaded, with the thought of amity, one quarter; likewise the second; likewise the third; likewise the fourth; so above, below, and across; he dwells, having pervaded because of the existence in it of all living beings, everywhere, the entire world, with the great, exalted, boundless thought of amity that is free of hate or malice.
"He lives, having pervaded, with the thought of compassion, one quarter; likewise the second; likewise the third; likewise the fourth; so above, below, and across; he dwells, having pervaded because of the existence in it of all living beings, everywhere, the entire world, with the great, exalted, boundless thought of compassion that is free of hate or malice.
"He lives, having pervaded, with the thought of gladness, one quarter; likewise the second; likewise the third; likewise the fourth; so above, below, and across; he dwells, having pervaded because of the existence in it of all living beings, everywhere, the entire world, with the great, exalted, boundless thought of gladness that is free of hate or malice.
"He lives, having pervaded, with the thought of equanimity, one quarter; likewise the second; likewise the third; likewise the fourth; so above, below, and across; he dwells, having pervaded because of the existence in it of all living beings, everywhere, the entire world, with the great, exalted, boundless thought of equanimity that is free of hate or malice.
(The Four Solaces)
17. "The disciple of the Noble Ones, Kalamas, who has suchahate-free mind, suchamalice-free mind, such an undefiled mind, and suchapurified mind, is one by whom four solaces are found here and now.
"'Suppose there isahereafter and there isafruit, result, of deeds done well or ill. Then it is possible that at the dissolution of the body after death, I shall arise in the heavenly world, which is possessed of the state of bliss.' This is the first solace found by him.
"'Suppose there is no hereafter and there is no fruit, no result, of deeds done well or ill. Yet in this world, here and now, free from hatred, free from malice, safe and sound, and happy, I keep myself.' This is the second solace found by him.
"'Suppose evil (results) befall an evil-doer. I, however, think of doing evil to no one. Then, how can ill (results) affect me who do no evil deed?' This is the third solace found by him.
"'Suppose evil (results) do not befall an evil-doer. Then I see myself purified in any case.' This is the fourth solace found by him.
"The disciple of the Noble Ones, Kalamas, who has suchahate-free mind, suchamalice-free mind, such an undefiled mind, and suchapurified mind, is one by whom, here and now, these four solaces are found."
"So it is, Blessed One. So it is, Sublime one. The disciple of the Noble Ones, venerable sir, who has suchahate-free mind, suchamalice-free mind, such an undefiled mind, and suchapurified mind, is one by whom, here and now, four solaces are found.
"The disciple of the Noble Ones, venerable sir, who has suchahate-free mind, suchamalice-free mind, such an undefiled mind, and suchapurified mind, is one by whom, here and now, these four solaces are found.
"Marvelous, venerable sir! Marvelous, venerable sir! As if, venerable sir,aperson were to turn face upwards what is upside down, or to uncover the concealed, or to point the way to one who is lost or to carryalamp in the darkness, thinking, 'Those who have eyes will see visible objects,' so has the Dhamma been set forth in many ways by the Blessed One. We, venerable sir, go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma for refuge, and to the Community of Bhikkhus for refuge. Venerable sir, may the Blessed One regard us as lay followers who have gone for refuge for life, from today."
Source : http://www.accesstoinsight.org/canon/anguttara/an3-65b.html
(၁) တဆင့်စကား အဆင့်ဆင့် ကြားရသည်တို့အပေါ်မှာလည်း အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြကုန်နှင့်။
(၂) သင်တို့အထက်က ဘိုးဘေးဘီဘင် အစဉ်အဆက်လာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလည်း အဆုံးသတ် အားကိုးပြီး အဟုတ်မှတ်၍ မကျင့်သုံးကြကုန်နှင့်
(၃) အခြေအမြစ်မပါသည့် သူပြောငါပြော ကောလာဟလ စကားတို့ကိုလည်း လက်ခံမမှားကြကုန်နှင့်။
(၄) ဘာသာရေးကျမ်းစာတို့၏ အရှိန်ဩဇာအောက်မှာလည်း နစ်မြုပ်၍မနေကြကုန်နှင့်။
(၅) အကျင့်နှင့် အသိမပါ တက္ကီဝါဒီတို့၏ အတွေးအခေါ်များကိုလည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည်မယူကြကုန်နှင့်။
(၆) အခြားအခြားသောလူတို့ အခြားအခြားသော အယူဝါဒတို့ထံမှ ပုံတူကူး၍ ကျင့်သုံးခြင်းသည်လည်း မိမိတို့ ဘဝနှင့် အပ်စပ်လိမ့်မည်ဟု အတည်တကျ မယူကြကုန်နှင့်။
(၇) မိမိတို့အတွေးအခေါ် အယူအဆကို မိမိတို့၏ အတွေးဖြင့်သာလျှင် အကြောင်းယုတ္တိပေး၍ တင်ပြနိုင်ရုံ မျှဖြင့် ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်ယုတ္တိ ဟုတ်ပြီဟု မယူကြကုန်နှင့်။
(၈) ဆရာတစ်ယောက်ယောက် လာရောက်ဟောပြောချက်သည် မိမိတွေးထင်ထားသည်နှင့် ကိုက်ညီသွားပြီဆို ရုံ မျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု မယူဆကြကုန်နှင့်။
(၉) လေးစားထိုက်သော လောကကဂရုပြုနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်၏ ဝါဒသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ဟူ၍လည်း တစ်ထစ်ချ မယူကြကုန်နှင့်
(၁၀) မိမိတို့ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သော ဆရာတို့၏ စကားတိုင်းသည်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီ အကျိုးရှိပြီဟု အပြီးသတ် မမှတ်ယူကြကုန်နှင့်။
ဟူ၍ ဘုရားရှင် မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်ကို သတိမူကြကုန်လော့ ....
ဂေါတမဗုဒ္ဒ (ဘီစီ ၅၆၃ - ၄၈၃)
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကေသမုတ္တိ ဆိုသော နိဂုံးအရပ်သို့ ရောက်ခဲ့လေ၏ ။ ထိုအရပ်၌ ကာလာမ အမည်ရှိသော ပုဏ္ဏားတို့ နေကြလေ၏ ။ ကာလမ ပုဏ္ဏားတို့သည် မြတ်စွာဘုရားနှင့်တွေ့ဆုံ
စဉ် အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်း စူးစမ်းကြလေ၏ ။
" အရှင်ဘုရား ၊ အချို့သော ရဟန်း ပုဏ္ဏား ( သာမဏ ဗြဟ္မဏ ) တို့သည် ဤ ကေသမုတ္တိ နိဂုံးသို့ ရောက်လာခဲ့ကြဖူးပါတယ် ၊ ဒီ ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ အယူဝါဒ ကိုသာပြဆိုကြပါတယ် ၊ ထွန်းပစေကြပါတယ် ၊ သူတစ်ပါး အယူဝါဒ ကိုမူကား ထိပါးကြပါတယ် ၊ မထီမဲ့မြင် ပြုကြပါတယ် ၊ ရှုတ်ချကြပါတယ် ၊ချေဖျက်ကြပါတယ် ။"
" အရှင်ဘုရား ၊ နောက်ထပ်လည်း အခြားသော ရဟန်း ပုဏ္ဏား တွေ ဤ နိဂုံး အရပ်သို့ ရောက်လာကြပါတယ် ၊ သူတို့ကလည်း သူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုသာ ပြကြပါတယ် ၊ ထွန်းပစေကြပါတယ် ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ အယူဝါဒတွေကိုတော့ ထိပါးကြပါတယ် ၊ ရှုတ်ချကြပါတယ်။ချေဖျက်ကြပါတယ် ။"
" အရှင်ဘုရား ၊ အဲဒီ သာမဏ ဗြဟ္မဏ ခေါ်တဲ့ ရဟန်းပုဏ္ဏားတွေထဲမှာ ဘယ်သူဟာ မှန်တဲ့စကား ကိုဆိုသလဲ ဆိုတာ တပည့်တော်တို့မှာ ယုံမှားတွေးတောပြီး သံသယ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် " လို့ ဗုဒ္ဓကို ကာလာမ ပုဏ္ဏားများက လျှောက်ထား ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ထိုအခါ ဗုဒ္ဓဘုရား က ကာလာမပုဏ္ဏား တို့အနေနှင့် သံသယ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ဖြစ်ထိုက်ကြောင်းကိုပြောဆို ညွှန်ပြပြီး အကြင်သူသည် အယူဝါဒတစ်ခုကို မှန်သည် မှားသည် ဆုံးဖြတ်လိုသော် ပြုကျင့်အပ်သည် ဟု အချက် ဆယ် ချက်ကို ညွှန်ပြတော်မူခဲ့လေသည် ။
ထိုအချက်သည် မျက်မှောက်ခေတ် သိပ္ပံနည်းကျ အတွေးအမြင် အားလုံး၏ အခြေခံမူ ဖြစ်ရုံသာမက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသမျှ ဒဿန အယူ အားလုံးနှင့်လည်း အကျုံးဝင်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရလေသည် ။ ထို အသိပညာတစ်ခု သစ္စာဆိုက်မှု၏ စံ ဟု ဆိုအပ်သောအချက် ဆယ်ချက်၏ အရေးပါအရာရောက်မှုကို မဆိုမီ ထိုဆယ်ချက်ကို ဤတွင် အသိပေး လိုပါသေးသည် ။
သို့မှသာ အမှန်ကိုသိလိုသောသစ္စာဝါဒီတိုင်း အတွက် ထိုအချက် ဆယ်ချက်သည် ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို အလင်းပေးသော မီးတိုင် ဆယ်တိုင်အဖြစ် တည်ရှိ နေပါလိမ့်မည် ။
ကေသမုတ္တိ နိဂုံးသား ကာလာမမင်းတို့အား မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်း...
“ ကာလာမ မင်းတို့ ၊ သင်တို့မှာ ယုံမှားသံသယ ဖြစ်သင့်ပေ၏ ။ သင်တို့သည်
(၁) ပြောသံ ကြားကာမျှဖြင့် ဟုတ်ပြီ ။ မှန်ပြီ ဟု အတည်မယူကုန်လင့်ဦး။
(၂) အစဉ် အဆက် စကားများဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၃) ဤသို့ ဖြစ်ဖူသတတ်ဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၄) ပိဋကတ်စာပေ နှင့် ညီညွတ်ပေသည် ဟူ၍လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၅) ကြံဆတွေးတော၍ ယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၆) အခြင်းအရာကို “ ကြံစည်” သော အားဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၇) မှတ်ယူထိုက်သော သဘောမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး ။
(၈) ငါတို့လေးစားသော ရဟန်း၏ စကားဟူ၍ လည်း မယူကုန်လင့်ဦး ။
ကာလာမ မင်းတို့ ---
(၉) ဤတရားတို့ကား အကုသိုလ်တရား ။ အပြစ်ရှိသော တရား ။ ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့အပ်သော တရားတည်း ။ထိုတရားတို့ကို ကျင့်သုံးပါက အစီးအပွားမရှိခြင်ငှာ ၊ ဆင်းရဲခြင်းငှာ ။ ဖြစ်ကုန်၏ ဟု သင်တို့သည် “ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ” သိသော အခါ၌ ယင်းတို့ကို စွန့်ပယ်ရာ၏ ။
(၁၀) ဤတရားတို့ကား ကုသိုလ်တရား ။အပြစ် မရှိသော တရား ။ ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းအပ်သော တရားများဖြစ်၍ ယင်းတို့ကို ကျင့်သုံးပါက အစီးအပွားရှိသည် ချမ်းသာခြင်းငှါ ဖြစ်သည်ဟု “မိမိ ကိုယ်တိုင် ” သိသော အခါ၌ မူ သင်တို့သည် ယင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံ နေကုန်ရာ၏ ။
( အဂုင်္တ္တရနိကာယ် ။ တိက နိပါတ် ။ မဟာ ဝဂ် ကေသ မုတ္တိသုတ် ) —
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ Ganda on Thursday, 11 July 2013
0 ( မှတ်ချက်ရေးချင်ရင် )
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဘာသာရေးဗဟုသုတ, မှတ်သားစရာ |
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဘ၀များစွာ ပါရမီတို့ကို ဖြည့်ကျင့်ရာ၌ ကျင့်စဉ်ကြီးသုံးချက်ကို ဦးထိပ်ထား၍ ကျင့်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုကျင့်ဆောင်ချက်ကြီးသုံးမျိုးကို “စရိယ ၃-ပါး” ဟူ၍ ခေါ်ကြသည်။ ထို စရိယာ ၃-မျိုးမှာ -
(၁) လောကတ္ထစရိယာ - လောကလူသား ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား သတ္တ၀ါအများ ကောင်းစားချမ်းသာရေး အတွက် ကျင့်စဉ်၊
(၂) ဉာတတ္ထစရိယာ - မိမိ၏ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုး ကောင်းစားချမ်းသာရေးအတွက် ကျင့်စဉ်၊
(၃) ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာ - သတ္တ၀ါများကို သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကယ်တင်နိုင်သော သဗ္ဗညုဘုရားဖြစ်ရေး အတွက် ကျင့်စဉ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဘ၀တိုင်း ဘ၀တိုင်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်တိုင်း ဤကျင့်စဉ်ကြီးသုံးရပ်ကို ဦးထိပ်ထားခဲ့လေသည်။
လောကတ္ထစရိယာ အရ လူ့လောကအပါအ၀င် သတ္တလောကကြီး တရပ်လုံး တိုးတက်ကောင်းစားရေး အတွက် အမြဲကျင့်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရှေးအခါက အင်္ဂတိမင်းကြီးသည် မိစ္ဆာအယူရှိသူ ဗြဟ္မဏတို့၏ ၀ါဒကို မှားယွင်းစွာ လိုက်နာပြီး သူ့အသက်သတ်မူ၊ သူ့ဥစ္စာခိုးမူ၊ သူတပါး သားမယားကို စော်ကားကျူးလွန်မူ။ မုသားပြောမူ၊ အရက်သေစာ သောက်စားမူတို့ကို ပြုလုပ်နေသည်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ငါးပါးသီလ မစောင့်ထိန်းကြဘဲ အကျင့်တရား ပျက်ပြားနေကြသည်။ သမီတော် ရုစာမင်းသမီးက ဟောပြသော်လည်း မလိုက်နာကြပေ။ သမီးတော်၏ အဓိဋ္ဌာန်ပြုမူကြောင့် ဘုရားလောင်းတော် နာရဒရသေ့ ကောင်းကင်မှ ကြွရောက်တန်ခိုးပြ၍ တရားဟောတော်မူမှ အင်္ဂတိမင်းကြီးနှင့်တကွ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းကြသည်။ ဤသို့လျှင် လူအများ ကောင်းစားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့လေသည်။
ဉာတတ္ထစရိယာ အရ ဘုရားလောင်းသည် မိမိအမျိုးသားတို့ ကောင်းစားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကို ဘုရားအလောင်း ကျီးမင်းဘ၀တွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏားတစ်ဦးသည် ညီလာခံဝင်လာစဉ် ကျီးတစ်ကောင်က မစင်စွန့်ချခဲ့သဖြင့် ကျီးတို့ကို ရွံမုန်းစိတ်နာပြီး ကျီးမျိုးပြုတ်စေရန် ကြံခဲ့ဖူးသည်။ ဘုရင်ဆင်များ၏ မီးလောင်ဒဏ်ရာ အနာကို “ကျီးကန်းအဆီဖြင့် သုတ်လိမ်းမှ ပျောက်ကင်းပါမည်” ဟု လက်စားချေလိုသော စိတ်ဖြင့် မဟုတ်မမှန် သံတော်ဦးတင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်လည်း ကျီးကန်းဟူသမျှ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခိုင်းသည်။
ဘုရားအလောင်းကျီးမင်းသည် မိမိအသက်ကို စွန့်၍ ဘုရင်ထံ အရောက်ဝင်ကာ ကျီးတို့မှာ အဆီမရှိကြောင်း တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ထိုသို့ အသက်စွန့်၍ မိမိအမျိုးကျီးကန်းများအတွက် ဘ၀အဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းကျင့်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုရားဖြစ်တော်မူသောအခါကား ပြောဖွယ်ရာမရှိ၊ ရောဟိနီမြစ်ရေခွဲဝေမူနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ စစ်မက်ခင်းကာ လက်နက်ဖြင့် ဖြေရှင်းကြမည်ရှိသောအခါ ကောင်းကင်မှ ကြွသွားတော်မူပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတရား ဟောကြားတော်မူရာ သာကီဝင် ဆွေတော်မျိုးတော်များအားလုံး အသက်ဘေးမှ လွတ်ကာ ချမ်းသာရာ ရခဲ့ကြသည်။
ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာ အရ ဘုရားဖြစ်ရေးကျင့်ဆောင်မူမှာ အထူးပြောရန်မလို၊ ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဤရည်မှန်းချက်ကြောင့်ပင် ဘ၀များစွာ ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်။ စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါး ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်။ ထိုကျင့်ကြံမူ မှန်သမျှ၏ ပဓာနရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားဖြစ်ရေးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူသောအခါ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအများ၏ အကျိုးစီိးပွားချမ်းသာရေးကိုသာ ၄၅-၀ါ ကာလပတ်လုံး မရပ်မနား ကြိုးစားဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ လေသည်။
ဤသည်မှာ ဘုရားအလောင်းတော်၏ ကျင့်စဉ် စရိယာကြီးသုံးပါးပင် ဖြစ်ပေသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ Ganda on Wednesday, 10 July 2013
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဘာသာရေးဗဟုသုတ, ဘာသာရေးပေးစာများ |
ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း စနစ်တကျ သင်ကြားပေးနိုင်မည့် ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတော်များ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပလျက် ရှိပါသည်။
ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါသည်။ စာရင်းပေးလိုသောသူသည်
၁။ ပြန်လည်သင်ကြားမည့် နေရာ (ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သီလရှင်ကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ) ရှိရမည်။
၂။ ပထမတန်း (Grade 1)၊ ဒုတိယတန်း (Grade 2)၊ တတိယတန်း (Grade 3)တို့ကို အတူတကွ သင်ကြားပေးနိုင်မည့် အသက် ၂၀ မှ ၆၀ အတွင်း ၁၀ တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဆရာ ဆရာမ (ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်) သုံးဦး ရှိရမည်။
၃။ ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းပြီးဆုံးပါက မိမိစာရင်းပေးသွင်းထားသော ဌာန၌ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ပြန်လည်သင်ကြားပေးရမည်။
အထက်ပါ သုံးချက်နှင့်သုံးချက်ပါ စည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံသူသည် ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီစဉ်ထုတ်ဝေသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ (ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်၊ ဆရာကိုင်စာအုပ်)၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
သင်တန်းကာလမှာ ၇ ရက်ကြာမြင့်ပါမည်။ နေစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ခရီးစရိတ်အားလုံး တာဝန်ယူပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားပြီး အတူတကွ လက်တွဲသာသနာပြုလိုသူများအနေဖြင့်
၀၉ ၄၅၀၀၅ ၇၆၀၉၊ ၀၉ ၄၉ ၂၃၄ ၆၂၉၊ ၀၉ ၄၂၀ ၇၂၄ ၀၉၀ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါသည်။
by Dhamma Schoolfoundation
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ Ganda on Wednesday,3July 2013
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ပြည်တွင်းသတင်း |
သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှ အမျိုးသား တစ်ဦး ငါးနှစ်ကြာ မစားမသောက်ဘဲ အသက်ရှင်ခဲ့
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ကာဘီဒီလာနီရလိုနီ ဟူသော အမျိုးသားတစ်ဦးသည် လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း မည်သည့် အစားအသောက်ကိုမျှ မစားဘဲ အသက်ရှုခြင်း ကျင့်စဉ်ကို လေ့ကျင့်၍
အသက်ရှင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ဗြိတိန်ထုတ် သတင်းစာ တစ်စောင်တွင် ဇွန်၂၈ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ မိမိအနေဖြင့် ငါးနှစ်ကြာ အစားအသောက်မစားဘဲ နေထိုင် ခဲ့သော်လည်း လေနှင့် နေတို့မှ ရရှိသည့် ကယ်လိုရီများကို စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရုပ်သံ အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ကာဘီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၄ဝ ပြည့်လွန်နှစ်နောက်ပိုင်းကအိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဓီသည် ၂၁ ရက်ကြာ အစာမစားဘဲ ရေသောက်၍ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အေဗစ်ဘလိန်း ဆိုသူသည် ၄၄ ရက်ကြာ အစာမစား ဘဲ ရေသောက်၍သာ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်သည့် သာဓကများစွာ ရှိသည်။ ကယ်လိုရီသည် လေ၊ အလင်းရောင်၊ တုံ့ပြန်ခံစားမှုနှင့် ဖိုတွန်များမှရရှိကြောင်း၊ စွမ်းအင်နေရာကို ဖွင့်မထားပါက မည်သို့မှ ခံစားရမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော် လွန်ခဲ့သည့် ၁ဝ လက ကာဘီသည် ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ထမင်းခုနစ်နပ် စားသောက်ခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်းထမင်း ခုနစ်နပ်တွင် ကယ်လိုရီ ၅ဝဝ နီးပါးပါဝင်ကြောင်း ဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Newssnip.com က ဖော်ပြခဲ့သည်။
လူတစ်ဦးသည် တစ်နေ့လျှင် ထမင်း သုံးနပ်စားမည် ဆိုပါက တစ်လလျှင် ထမင်းနပ်ပေါင်း ၉ဝ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁ဝ လကျော်လျှင် ထမင်းနပ်ပေါင်း ၉ဝဝ ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကာဘီက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ Ganda on
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ပြည်ပသတင်း |
အနန္တအတုမရှိ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား
အလှူရှင်များအား MMSA အဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးအပ်
International Buddhist Collage
ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သားမားများအတွက် ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
HIT COUNTER 888 casino what is forex William Hill ROULETTE
IELTS အမေးအဖြေ (1)
scholarship sits (1)
TOEFL အမေးအဖြေ (14)
TOEFL နှင့် IELTS (6)
MMSA မှ ကလောင်ရှင်များ
( MMSA )
Buddhism and Its Teaching
International NewsAljazeera Thisissomerset Indymedia Bexleytimes Bromleytimes Camdengazette Eastlondonadvertiser gravesendreporter EDIT EDIT EDIT
တိုင်းရင်းသားသတင်းဌာနများစုစည်းမှု ရခိုင်ရိုးမ နိရဉ္ခရာသတင်း ကရင်သတင်းစဉ် သျမ်းသံတော်ဆင့် ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်) လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ ကောင်းဝါ EDIT
သတင်းဌာနများစုစည်းမှု ဧရာဝတီသတင်းဌာန ဗွီအိုအေ မြန်မာ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန BBC မြန်မာ DVB မြန်မာ RFA မြန်မာ ယနေ့မြန်မာ မိုးမခသတင်းဌာန မောက္ခသတင်းဌာန EDIT
ဘလော့ဂ်များစုစည်းမှုArakan Kotawchayသဒ္ဓါလှိုင်း မြတ်မွန် ဆုံဆည်းရာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ( The Power of People) Golden Colour Revolution EDIT EDIT EDIT
Myanmar Monk Student Association(Chiang Mai, Thailand) @All rights reserved
မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့(ချင်းမိုင်မြို့ ထိုင်းနိူင်ငံ) !...Created By ထာဝရသီရိ...!